ပျဉ်ထောင်ရှင်မ - ဝီကီပီးဒီးယား
လူဖြစ်စဉ်ဘဝက အပျိုကြီး ဖြစ်၏။ အင်းများ၊ ချောင်းများသို့ သွားရောက်ကာ ငါးအရောင်းအဝယ်ပြုလုပ်နေစဉ် သေဆုံးခဲ့သည်။ အင်းသမားများအပေါ် အစွဲအလမ်း ဥပါဒါန်ကြောင့် အင်းစောင့်နတ် “ပျဉ်ထောင်ရှင်မ” ဘဝသို့ ရောက်ရှိခဲ့သည်။
ပျဉ်ထောင်ရှင်မသည် ဗန်းမော်ခရိုင်အတွင်းရှိ လဘိုင်တင်အင်း၊ လဟာကြီးအင်း၊ လဟာလေးအင်း၊ ဆင်ခေါင်အင်း၊ သကြားဟင်းအို စသည်အင်းများကို အပိုင်စားရသည်။ အင်းသူကြီးများသည် အင်းပိတ်ချိန်ဖြစ်သည် ဝါဆို၊ ဝါခေါင်တွင် ပျဉ်ထောင်ရှင်မကို တင်မြှောက်ပသကြသည်။
ပျဉ်ထောင်ရှင်မအား ပူဇော်ပသရာတွင် ထမင်းဖြူ၊ ငါးကြော်ပွဲ၊ ဘီး၊ မှန်၊ သနပ်ခါးတုံး၊ ကျောက်ပျဉ်၊ ဆံစု၊ မိန်းမအဝတ်အစား အစုံပါရသည်။ ပျဉ်ထောင်ရှင်မသည် လူဖြစ်စဉ်က ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်သူ ဖြစ်သဖြင့် နတ်တင်သူများသည် အပျော်အရွှင် အပြောင်အလှောင်စကားများဖြင့် ပြောဆိုကာ “ဖေ၊ မေ၊ နင်၊ ငါ” စသည်ဖြင့် ဆဲဆို ကြရသည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြောင်လှောင်ဆဲဆိုခြင်း မပြုပါက ငါးအရ နည်းလေသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ဦးထွေးဟန် (၁၉၉၁ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ၊ ၁၇ ရက်). မြန်မာ့မိရိုးဖလာဓလေ့ နတ်သမိုင်း. အမှတ် - ၅၊ တင့်ဆန်းလမ်း၊ ဗဟန်း၊ ရန်ကုန်မြို့: ရွှေပုရပိုက်စာပေ, ၂၁၀။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပျဉ်ထောင်ရှင်မ&oldid=475475" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၇ စက်တင်ဘာ ၂၀၁၉၊ ၁၄:၂၇ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။